Eyona aromatherapy yeoyile yelavender efanelekileyo yeoyile yemveliso yeoyile mveliso kunye nabenzi | HaiRui
aromatherapy I-oyile yeLavender ebalulekileyo yeoyile yevumba elimnandi
Inombolo ye-CAS .:
Incasa yendalo kunye namafutha aqholiweyo
Incasa yemihla ngemihla, incasa yokutya, incasa yecuba, incasa yemizi-mveliso, ezonyango, iziqholo
Umbala wokukhanya ulwelo lwengca
Phantse isiqhamo esineziqhamo esimnandi, isityalo esitsha
Ingenakunyibilika emanzini, i-95% ye-Ethanol, i-DPG, i-DEP, ioyile emhlophe
ILinalool 30%, iLinalyl acetate 40%, iLavandulyl acetate kunye neLavandulol
I-Steam ikhutshwe kwiintyatyambo ezintsha kunye neziqu
Ubungakanani bephakheji enye:
Ubunzima obukhulu bodwa:
1 Umnatha Wt. ye-50KGS / 180KGS kwi-gallon GI Drums 2 I-logo yoMthengi kunye nePrinta 3 i-oda encinci ye-1kg, 2kg, 5kg kwiAlumunm Bottle
Ubungakanani (iikhilogram) 1 - 100 101 - 300 301 - 1000 > 1000
Est. Ixesha (iintsuku) 6 10 15 Kuya kuthethathethwana
I-HaiRui iLavender Ioyile I-Pharma yeBanga le-CAS ye-8000-28-0
Inkangeleko Umbala wokukhanya ulwelo lwengca
Isalathiso sokuKhombisa 20 ° c 1.459-1.469
Indawo yokuflasha 70 C
Isinyibilikisi Ingenakunyibilika emanzini, i-95% ye-Ethanol, i-DPG, i-DEP, ioyile emhlophe
Umxholo ILinalool 30%, iLinalyl acetate 40%, iLavandulyl i-acetate kunye neLavandulol
I-oyile yeLavender …………………………………………………………………………………………………….
Ioyile yeLavender yi ioli ebalulekileyo ifunyenwe yi ulwelo kwiintyatyambo zeentlobo ezithile ze Ilavenda. Zimbini iintlobo ezahlukileyo, ioyile yeentyatyambo ze-lavender, ioyile engenambala, engenakunyibilika emanzini, ene-0.885g / mL yokuxinana; kunye ne-lavender spike oil, i-distillate evela kwi-herbILavandula latifolia, Ubuninzi be-0.905g / mL.
I-oyile yeentyatyambo zeLavender sisikhundla se Ifomula kaZwelonke kwaye i IBritish Pharmacopoeia. Njengazo zonke iioyile ezifanelekileyo, ayisiyonto inyuluikhompawundi; ngumxube ontsonkothileyo wento yendaloiiprotochemicals, kubandakanya linalool kwaye i-acetate ye-linalyl.
Ioyile yeKashmir yeLavender idume ngokuveliswa kwelavenda emazantsi eentaba zeHimalaya. Ukusukela ngo-2011, oyena mvelisi weoyile inkulu emhlabeniBhulgariya.
Ioyile yeLavender, ekudala isetyenziswa ekwenzeni iziqholo, inokusetyenziswa nakwi-aromatherapy. Ivumba elinefuthe lokuthomalalisa elinokunceda ekuphumleni nasekunciphiseni uxinzelelo noxinzelelo. ILasea Iicapsule eziqukethe ioyile ye-lavender enexabiso eliphezulu le-linalool kunye ne-acylyl acetate, ebizwa ngokuba Silexan Umenzi, wamkelwe njengexhala eJamani.Ukuvunywa kusekwe ekufumaneni ukuba iifomsile zinokuthelekiswa nokusebenza kwidosi ephantsi ye-lorazepam.
Sebenzisa kwelinye iyeza
Ngokokuxhasa amanye amayeza, ioyile ye lavender inokusetyenziswa njengeyeza lokubulala iintlungu kunye nokuthomalalisa iintlungu ekusetyenzisweni ekutshisweni okuncinci kunye nokulunywa zizinambuzane kunye nokuhlaba.
Kukwathiwa kunyanga izifo ezahlukeneyo, njengokutshiswa lilanga kunye nokuhlaselwa lilanga. Ingasetyenziselwa kwimixube yeoyile yokuthambisa, enokuthi isebenze ekupheliseni iintlungu zokudibanisa kunye nezihlunu, okanye kwimixube yesifuba yokuthambisa ukukhululeka kwesifuba kunye ne-bronchitic spasm. Kukwathiwa ukunyanga iintwala entloko xa zisetyenziswa kumxube we-rinse yeenwele, okanye kwikama entle yokuphelisa i-nits. Olunye uphononongo lubonisa ukusetyenziswa kweoyile ye-lavender ebalulekileyo endaweni ye-povidone-iodine kukhathalelo lwenxeba lwe-episiotomy.
In vitro, i-lavender oyile yi-cytotoxic kunye ne-photosensitizing. Isifundo sibonise ukuba i-lavender i-oyile ine-cytotoxic kwiiseli zolusu lomntui-In vitro(iiseli ze-endothelial kunye ne-fibroblasts) kuxinzelelo lwe-0.25%. ILinalool, eyinxalenye yeoyile ye-lavender, ibonakalisa imisebenzi yeoyile iphela, ebonisa ukuba i-linalool inokuba yeyona nto isebenzayo kwioyile ye-lavender. Iziphumo zolunye uphononongo lubonise ukuba izicatshulwa ezinamanzi zinciphise isalathiso se-mitotic, kodwa zenze i-chromosome aberrations kunye ne-mitotic aberrations xa ithelekiswa nolawulo, kakhulu. Izicoci ezinamanzi ezibangele ikhefu, ukunamathela, ukuphambuka kwepali kunye nemicronuclei. Ngaphaya koko, ezi ziphumo zazinxulumene nokukhupha ukugxila.
Nangona kunjalo, ngophando olwenziwe ngo-2005 “nangona bekusandula ukuxelwa ukuba i-lavender oyile, kunye neyona ndawo ibalulekileyo ye-linalyl acetate, zinetyhefu kwiiseli zolusu lomntu kwi-vitro, ukuqhakamshelana nedermatitis kwioyile ye-lavender kubonakala ngathi kwenzeka rhoqo. Ukusebenza kwale vitroity ityhefu ekusetyenzisweni kwesikhumba se-Lavandula yeoyile kuhlala kungacaci. ”
Ngokubhekiselele kwi-phototoxicity, ingxelo yophando ka-2007 evela kubaphandi baseYurophu yathi, "I-oyile ye-Lavender kunye ne-oyile ye-sandalwood ayibanga nefotohaemolysis kwinkqubo yethu yovavanyo. Nangona kunjalo, iingxelo ezimbalwa malunga nefotosensitivity reaction ngenxa yezi zinto zipapashiwe, umz. Esinye isigulana esinokukhanya okungapheliyo kunye novavanyo olufanelekileyo lwepatch-patch kwioyile yesandalwood. ”
Ioyile yespike lavender nayo ngamanye amaxesha iye yasetyenziswa njengesinyibilikisi kwipeyinti yeoyile, ubukhulu becala ngaphambi kokuba ukusetyenziswa kweturpentine ediziweyo kuqheleke. Umzekelo uFrancisco Pacheco ukhankanya ukusetyenziswa kweoyile yelavenda kwincwadi yakhe ethi "Arte de la pintura"
1. Mini ukuze 1KG, 2KG, 5KG ezikhoyo
2. Isampula yasimahla
3. Ixabiso lokhuphiswano kunye nenkonzo esemagqabini emva kokuthengisa
4. Elona xabiso liphezulu kunye nonikezelo lwefektri
Iinkcukacha zibonisa …………………………………
Egqithileyo Ukunyamekela umzimba ngeoyile yeAloe Vera yeoyile
Okulandelayo: Ii-Diffusers zeoyile ebalulekileyo yeRosemary
Isitokhwe esikulungeleyo, nanini na. AKUKHO MOQ,
I-oyile yeLavender ebalulekileyo
I-oyile yevumba leLavender
Ioyile yeLavender ecocekileyo
Umthengisi we-oyile wase-China uMthengisi weoyile
Ixabiso Bulk Ihowuliseyili Deep Brown Patchouli oyile F ...
Ulicid chlorophyll unicity kwinqanaba lamayeza
Uhlobo lokulima lweNdalo kunye neOrganic lweLinseed oi ...
Ukutya kweoyile yendalo